Koronaavaayiras: Itoophiyaarraa dabalatee imaltoonni biyyoota afurii Ingilaand seenuu dhorkaman - BBC News Afaan Oromoo
Koronaavaayiras: Itoophiyaarraa dabalatee imaltoonni biyyoota afurii Ingilaand seenuu dhorkaman
16 Bitooteessa 2021
Mootummaan Ingilaand COVID-19 gosti haaraan gara biyyakootti seenuu mala soda jedhuun imaltoota Itoophiyaa, Omaan, Somaaliyaa fi Qaataa irraa gara biyyattii galan Jimaata Bitootessa 19 irraa kaasee akka hin seenne dhorkite.
Akka gabaasni mootummaan UK jedhutti tarkaanfiin lammileen biyyoota afranirraa dhufanis ta'e namoonni biyyoota kanneen keessa qaxxaamuran akka hin seenne dhorkuu raaga Covid gosti haaraan seenuu mala yaaddoon jedhu dabaluusaa hordofeeti.
Bitootessa 19, 2021 irraa kaasee lammilee Biriteeniifi Ayerlaand ykn warri mirgoota jireenyaa qabanfi warra viizaa yeroo dheeraaf turu qaban dabalatee qofaaf seenuun hayyamama jedhameera.
Isaaniyyu akkuma seenaniin dhaabbata mootummaatiin mirkanaa'e keessatti guyyoota 10f adda of baasanii akka turan kan taasifamu yommuu ta'u, yeroo turtii isaaniittis guyyaa 2ffaa fi 8ffaa irratti qorannoo koronaavaayirasii taasisuu qab jechuun gabaasni kun mullisa.
Itoophiyaatti weerarri koronaa ''haala sodaachisaa ta'een'' dabalaa jiraachuufi uummanni of eeggannoo gochuu dhiisuun yaaddeessaa ta'uu Ministeerri Fayyaa biyyattii tibbana ibsaa jira.
Ministirri Fayyaa Dr Liyaa Taaddesee, ''Miidhaa Koronaan qaqqabsiisu haala sodaachisaarra wayita gahe kanatti akka hawaasaatti balaa gahu haala madaaluun of eeggachaa hin jirru'' jedhan.
.Sababa of dagannaa guddaa hawaasa keessatti mul'atuun lakkoofsa namoota haaraa Vaayirasichaan qabaman akkaan dabaluun cinaatti, lakkoofsi namoota sababa dhibee kanaan lubbuu dhabaniillee haalaan dabaleera.
Dhukkubsattootni Covid-19 'du'aafi jireenya gidduutti' dabaree veentileetaraa eeggachaa jiru
"Koronaan mana koo diige" - nama haadha warraa deessuu vaayirasichaan dhabe
Sababiin AstraZeneca fayyadamuu dhaabsisu hin jiru-Dhaabbata Fayyaa Addunyaa
Mootummaan UK biyyoota afran kana toora warra biyyashee hin seenne keessa yeroo galchitu kanatti Poorchugaaliifi Mooriishe ammoo dhorkaa kanaan dura ture jalaa baasuuf jirti.
Madda suuraa, UK government
Hanga ammaatti talaalliin miliyoona 34 UK keessatti dhiyaateera garuu tarkaanfiin dhorkaa kun gosti vaayrasichaa haaraan kan akka Afrikaa Kibbaafi Biraazil keessatti argamee seenuu malu soda jedhu hir'isuudhaaf.
Akka ibsa mootummaa UK kanaatti xiyyaaronni daldalaafi dhuunfaa biyyoota afranirraa dhufanis hin seenan. Xiyyaarota meeshaa fe'an imaltoota hin qabne garuu hin ilaallatu.
Koronaavaayiras: Dhukkubsattootni Covid-19 'du'aafi jireenya gidduutti' dabaree veentileetaraa eeggachaa jiru
6 Bitooteessa 2021
13 Bitooteessa 2021
Sababiin AstraZeneca fayyadamuu dhaabsisu hin jiru - WHO
12 Bitooteessa 2021